Mepụta, kekọrịta ma metụta azụmaahịa gị KPIs | Martech Zone
Mepụta, kekọrịta ma metụta KPI azụmahịa gị
Satọde, Ọgọstụ 3, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Otu n'ime nsogbu m na mgbe nchịkọta bụ na ndị na-ere ahịa na-eche na ha na-ebuwanye ọtụtụ ụzọ bụ ụzọ isi bulie nyiwe ha. Ọ bụ ezie na ọ dị mma ịnwe ọtụtụ puku mgbanwe iji kọọ maka ya, ịghọta nke ndị mgbanwe nwere mmetụta na azụmahịa gị siri ike karị. Ọbụna nghọta nke mgbanwe dị iche iche na-ajụ ajụjụ maka otu esi emegharị agịga ahụ. Ihe nyocha nyocha yiri ka ọ na-ewepụta ajụjụ karịa azịza.
Akwụkwọ akụkọ Tidemark Storylines bụ ihe ngosipụta a na-eme nke ọma nke na-egosi akụkọ banyere arụmọrụ nke ụlọ ọrụ. Ndị a “actiongraphics” jikọtara usoro gị, data gị, na data sitere na mpụga mgbidi gị iji nye gị nkọwa zuru oke nke azụmahịa ahụ. Ha na-enye gị ikike ịghọta ma metụta ahụike gị niile, ndị ọrụ ọrụ, gịnị ma ọ bụrụ na ịme anwansị, ịba uru, na usoro amụma.
Tidemark bụ Ọrụ Arụ Ọrụ Enterprise Wuru maka Igwe ojii. Nke a bụ nkọwa:
Kwa saịtị ha, Tidemark na-anapụta ngwa nyocha iji mee ngwa ngwa ngwa gị. Ngwa ha na-ebuli ikpo okwu ngwa dị ike nke nwere njikwa njikwa arụmọrụ arụpụtara, na-eme ka ị nwee ike ịhazi ngwa anyị ngwa ngwa na azụmaahịa gị chọrọ.
Atụmatụ ego - Mepụta atụmatụ na amụma ga - enyere gị aka ịchụpụ azụmaahịa ahụ maka ebumnuche gị. Atụmatụ ego gụnyere usoro maka atụmatụ ego ị ga-enweta, ịhazi ndị ọrụ ọrụ, ịkwụ ụgwọ mmefu ọrụ, ịkwụ ụgwọ mmefu ego, yana akwụkwọ nhazi na usoro ị ga - esi nweta ego zuru ezu. Site na mmekorita ya na nyocha, inwere ike idozi ya ohuru na amụma ohuru dika ahia gi gha agbanwe.
Atụmatụ ọrụ - Mee ka azụmahịa gị site na ị nweta ndenye sitere na ndị kacha nso ngwaahịa na ndị ahịa. Atụmatụ ọrụ na-enye gị ohere ịnakọta ndị ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ iji mepụta amụma amụma na atụmatụ ego, na-enye gị ohere ịhụ atụmatụ azụmaahịa niile. Ijikọ arụmọrụ na atụmatụ ego na-eme ka onye ọ bụla nọ na nzukọ ahụ na-arụ ọrụ na otu ozi ahụ maka otu ebumnuche.
Usoro njikwa - Nyochaa ngwa ngwa nke nzukọ gị niile ma mee ihe mgbe ọ dị mkpa. Ngwa njikwa njikwa anyị na-enyere gị aka ịmegharị nyocha iche iche iji wepụta okwu, chịkọta ebumnuche metric & omume ndị adịghị na sistemụ mmalite, rụkọta ọnụ na usoro nyocha gị, wee lelee mmetụta dị na nsonaazụ ego.
Ngwa Tidemark na-ekerịta ngwa ngwa igwe ojii nke na-enye usoro iji hụ na ngwa anyị niile na-enye ọnọdụ na omume.
Tags: dashboardPriselọ Ọrụ Ọrụ Ọrụkpisakụkọoria ojootidemark akụkọ